ETA ọhụrụ teknụzụ ọhụrụ ewepụtara maka ikpochapụ mbata na ọpụpụ Australia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » ETA ọhụrụ teknụzụ ọhụrụ ewepụtara maka ikpochapụ mbata na ọpụpụ Australia
Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Iwughachi • Technology • Tourism • Transportation
Ọgbara ọhụrụ ETA
A na-ekpochi Australia ugbu a maka ọtụtụ ndị ọbịa si mba ọzọ, mana ozugbo ịmalitegharị na-eme ngwa ọhụrụ iji mee ka nhichapụ ndị ọbịa na mba a maara dị ka Down Under nwere ike ịdabere na APP ọhụrụ iji mee ka usoro a chọrọ iji banye na mba ahụ.
Ngwa Australia ETA bụ nsonaazụ nke imekọ ihe ọnụ na-emetụta ndị ọkachamara sitere na Ngalaba Ahụike Australia, SITA, na Arq Group.
Ezubere ma mepụta na Sydney, ngwa ahụ na -enye ohere ka ndị obodo tozuru etozu tinye akwụkwọ maka ETA, n'ime nkeji ole na ole, site na ngwaọrụ mkpanaka ha.
N'iji teknụzụ emebere nke ọma iji jupụta data site na paspọtụ onye na-arịọ arịrịọ wee jide biometrics ha, usoro ọrụ onwe a nwere oke nchekwa ọ bụghị naanị na-abawanye izi ezi na ịba ụba nke data mana ọ na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
SITA onye ọsụ ụzọ usoro ETA maka asọmpi 2000 nke Sydney iji nye ndị ọchịchị ohere ịhụ ụzọ n'ime ọtụtụ nde ndị ọbịa na -eme atụmatụ ịgafe ókè ma belata ihe mgbochi na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ Australia na ebe nlele mbata na ọpụpụ. Kemgbe ewebatara ya, ETA akwụsịla ule oge wee bute ụzọ maka guzobe visa elektrọnik dịka ọwa ọkọlọtọ maka ụdị visa dị mfe (dịka, Visa mgbe ọ bịarutere) site na ngalaba mbata na ọpụpụ n'ụwa niile.
Australia ka bụ ebe njem ama ama na ETA APP ga -egosi ịdị irè ya mgbe nsogbu COVID dị ugbu a na mba ahụ emepegharịala nye ndị njem.
Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke nnukwu mgbanwe teknụzụ gbanwere, ọ bụ oge ịmaliteghachi ETA site na ngwa Australia ETA. Teknụzụ ọhụrụ na ihe atụ ọhụrụ na -emepụta atụmanya obodo na -agbanwe agbanwe nke ịnweta, ahụmịhe na ọrụ, ọkachasị mgbe ihe ọhụrụ bụ injin na -enye ike mgbanwe ahụ.
Usoro nchọpụta na nyocha nke oru ngo a gụnyere ịghọta mkpa onye na onye njem bụ isi. Ọ gbadoro anya n'inweta nghọta miri emi nke onye na-arịọ arịrịọ, azụmaahịa, yana chọrọ ụlọ ọrụ njem na atụmanya iji kọwaa njedebe onye ọrụ steeti ga-akwụsị n'ọgwụgwụ.
N'ịmepụta usoro ọgbara ọhụrụ site na iji teknụzụ dị elu, ndị otu ahụ chetara mkpa ọ dị iwepụta ngwaahịa nwere ọgụgụ isi na nchekwa mgbe ha na-enye ike dị mgbagwoju anya metụtara njide data, nkwado, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, na nke kachasị mkpa, nyocha njirimara. Anyị mere nyocha teknụzụ zuru oke, njikọta, na nnwale onye ọrụ iji hụ na azịza ya adịla njikere na itinye uche nke onye ọrụ ka dị n'obi imewe ahụ. Igwe oyibo kpuchiri teknụzụ ndị ọzọ niile, si otú a na-eme ka ngwa ahụ bụrụ ihe akaebe ga-adị n'ọdịnihu ma dịkwa nfe maka teknụzụ ndị dị ugbu a ga-eji nke ọhụrụ na nke ka mma dochie ya n'ọdịnihu.
Usoro a dị n'ofe ngwaọrụ. Iji mee ka uche ahụ dịrị na ahụmịhe onye ọrụ, ngwa ahụ chọrọ ịnye ụzọ dị mfe ma kwụ ọtọ iji nweta visa Australia n'ofe ngwaọrụ dị na nyiwe iOS na gam akporo.
Kedu ka ngwa si arụ ọrụ?
Ngwa a na-eji teknụzụ mkpanaka (Njirimara Njirimara Njirimara (OCR) na Nkwukọrịta Ubi Dị nso (NFC)) iji weghara ma buru ụzọ mejupụta paspọtụ dị mkpa na ozi njirimara ozugbo na paspọtụ. Ịnweta data ngwa dị mkpa ozugbo site na ntụkwasị obi na -ewepụ njehie ntinye data na enweghị nkwekọrịta na -emetụta nhazi visa.
Ngwa ahụ na -akwado ma na -akwado akwụkwọ ikike ngafe elektrọnik site na ikike NFC nke ama ama na ntinye akwụkwọ kama na oke ala. A na -enweta ohere mgbawa paspọtụ site na iji OCR gụọ mpaghara a na -agụpụta igwe (MRZ) ebipụtara n'ime paspọtụ wee nweta igodo. Igodo a na -enye ohere ịnweta mgbawa ma gosipụta ya site na iji asambodo dijitalụ n'ime mgbawa, na -ahụ na paspọtụ bụ ezigbo ya na mgbawa ahụ emebighị. Ozugbo ekwenyesiri mgbawa ahụ, a ga -agụ data dị na mgbape - nke mejupụtara akwụkwọ njem, data njirimara, na onyonyo dijitalụ nke onye ji paspọtụ -. A na -eji ya atụnyere ihe onyonyo selfie tupu ịga n'ihu.
Usoro njide ihe onyonyo nke selfie na-eme ndụ dị mgbagwoju anya na nyocha mgbochi mgbochi megide ọtụtụ profaịlụ ihe ize ndụ ihu, nke na-ewusi nkwenye njirimara nke onye na-arịọ arịrịọ. Ngwa a na-eme nyocha nchedo ndị a dị mkpa n'enweghị nsogbu na-emeghị ka onye anamachọihe ahụ nwee nsogbu.
Ejikọtara OCR, NFC, onyonyo selfie na ịdị ndụ dị mgbagwoju anya, yana nyocha mgbochi mgbochi n'ime ngwa ahụ n'ụdị ọhụụ, n'ihe anyị kwenyere na ọ bụ nke mba mbụ.
Ndị njem na -enyefe ngwa ahụ otu n'ime akụ kacha baa uru ha - data ha. Kedu otu i siri dozie nchegbu nzuzo na mmepe ya?
Anyị na -arụ ọrụ ihe nzuzo site na imewe n'oge mmepe ngwa niile, na -amalite site na Ntụle Mmetụta Nzuzo iji hụ na ntuziaka niile, njikwa data, na nchekwa na -agbaso ihe nzuzo nzuzo siri ike nke gọọmentị Australia.
A na -echekwa data nkeonwe niile na obere akpa echekwara na ngwaọrụ onye ọrụ. Enweghị data a na -ekerịta ndị ọzọ metụtara, ewezuga ihe gbasara ụlọ, nke chọrọ ozi ka hazie ngwa ETA. Edebere usoro na ọnọdụ nke ọma n'ime ngwa maka onye ọrụ ịnabata tupu ịga n'ihu. Nke a na -akọwa ka esi edobe data na nchekwa, yana otu esi eji ya ma chekwaa ya mgbe a na -ebunye ya na ihe gbasara ụlọ.
Iji hụ na nzuzo nkeonwe, ndị na -achọ akwụkwọ nwere ike ihichapụ nkọwa nkeonwe ha na ngwa ndị gara aga site na ngwa n'oge ọ bụla. Na mgbakwunye, ngwaọrụ niile edebanyere aha ndị njem nke nwekwara ike itinye akwụkwọ n'aha ndị na -achọ akwụkwọ anaghị edobe onye anamachọihe ma ọ bụ data ngwa na ngwaọrụ ha mgbe etinyechara akwụkwọ anamachọihe ahụ.
Ngwa a na -eji nchekwa mpaghara echekwara yana usoro nkwenye siri ike. A na -ezochi nkwukọrịta niile dị n'etiti ngwaọrụ na sistemụ azụ, na -ahụ na nchekwa na njikwa data onye ọrụ.
Gịnị bụ nzaghachi ugbu a?
Site na mbido, usoro imepụta ahụmihe butere ụzọ dị mfe maka onye na -arịọ arịrịọ ya na ahụmịhe onye ọrụ na -enweghị mgbagha na nke enweghị nghọta na nyiwe iOS na gam akporo. A nabatara ngwa sitere na ya nke ọma, ebe ọtụtụ ndị ọrụ na -eme ka ịdị mfe na ịdị mma dị.
Nnyocha na -aga n'ihu, nyocha omume, na nzaghachi onye ọrụ bụ akụkụ nke usoro azịza. Ikike imelite ngwa ngwa emeela ka nkwalite nyere aka n'ịgụ ụdị akwụkwọ ikike ngafe dị iche iche, na -enye nkwado maka ọnọdụ nhazi, yana mma ka mma maka ntuziaka nkuzi.
Nzaghachi bara uru nke ndị na -arịọ arịrịọ nyere site na ụlọ ahịa ngwa yana ọrụ Kpọtụrụ anyị ngwa ahụ emeela ụfọdụ mgbanwe na ndozi etinyere kemgbe mmalite pilot, si otú a na -ewusi ngwa ahụ ike.
Ntinye aka nke ndị ọrụ zuru ụwa ọnụ maka ịnwale ngwaọrụ dị iche iche na ịchịkọta ozi ahụmịhe onye ọrụ mere ka ngwa ahụ na -arụ ọrụ n'ofe gburugburu ngwaọrụ dị iche iche na mgbanwe paspọtụ eletrọnịkị. Kemgbe ebuputara ngwa ahụ na Ọktoba 2020, ọ kwadola njem gaa Australia maka puku kwuru puku mmadụ n'oge ọrịa a.
ETA ọhụrụ teknụzụ dị elu ewepụtara maka ikpochapụ mbata na ọpụpụ Australia- eTurboNews | Ụdị | Akụkọ njem | Blog nke Johnny G. Santo ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 12, 2021 na 14:06
[…] ETA teknụzụ ọhụrụ dị elu ewepụtara maka ikpochapụ mbata na ọpụpụ Australia eTurboNews | Ụdị | Akụkọ njem […]